फेसबुकमा टिप्पणी गर्‍यो कि जेल ? « Nepal24Hours.com – 'Integration Through Media'
फेसबुकमा टिप्पणी गर्‍यो कि जेल ?
११ असार २०७१, बुधबार ०६:१५ मा प्रकाशित
काठमाडौं, ११ असार । सप्तरीमा सुध्रँदो सुरक्षा शीर्षकमा अखबारमा प्रकाशित समाचार फेसबुकमा पोस्ट भएपछि त्यसमा टिप्पणी गर्दा सप्तरी पोर्ताहका अब्दुल रहमान २० दिन थुनामा परे ।
उनको टिप्पणी थियो, ‘के सुध्रिनु आफ्नै चोरिएको बाइक फिर्ता पाउन पैसा तिर्नुपर्‍यो । त्यो पनि ५० हजार ।’ टिप्पणी गर्दा थुनिएको खबर सञ्चार माध्यममा आएपछि प्रहरी मुख्यालयदेखि न्यायालयसम्मको ध्यानाकर्षण भयो । अहिले उनी सामान्य धरौटीमा छुटेका छन् ।
निषेध गरिएको ठाउँबाट गृहमन्त्रीले बाटो काटेको तस्बिर फेसबुकमा पोस्ट गरिएपछि ‘गोली हान्न पर्छ’ लेख्ने गृहकै शाखा अधिकृत राजु साहमाथि विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो ।
पत्रकारद्वय दिनेश आचार्य र सुशील पन्त पनि यसअघिदेखि नै यही मुद्दा खेपिरहेका छन् । पन्त अखबारमा अरूले नै लेखेको समाचार फेसबुकमा पोस्ट गरेका कारण थुनिएका थिए । उनी थुना परेदेखि नै सुरु भएको अभिव्यक्तिमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन लगाउन हुने कि नहुने भन्ने बहस रहमान थुनिएपछि झन् चर्किएको छ ।
‘टीकाटिप्पणी गर्नेलाई विद्युतीय माध्यमबाट अपराध गर्नेविरुद्धकै कानुन लगाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हमला हो,’ पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले भने ।
महानगरीय अपराध महाशाखाले चालू आर्थिक वर्षमै सामाजिक सञ्जालमार्फत अरूको चरित्रहत्या गर्ने १५ जनाविरुद्ध अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
काठमाडौं प्रहरी परिसरका डीएसपी रमेश बस्नेतका अनुसार सामाजिक सञ्जाल (खासगरी फेसबुक) दुरुपयोग गरी चरित्रहत्या भएका उजुरी बाक्लै आउन थालेका छन् ।
अधिकांश उजुरी युवतीको नाङ्गो तस्बिरमा अरू कसैको टाउको जोडेर सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्रहत्याको प्रयास भएको भन्ने छन् । युवायुवतीबीच राम्रै सम्बन्ध हुँदा खिचेका तस्बिर सम्बन्ध बिग्रेपछि सार्वजनिक गरेकामा पनि उजुरी पर्ने गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट